Victorious Skin & Aesthetic Clinic | Beauty MM
Victorious Skin & Aesth…
VICTORIOUS CLINIC ( Skin &Aesthetic) မှ လူကြီးမင်းတို့ ရဲ့ အရေပြားပေါ်တွင်ရှိသော ပြသ၁နာများနှင့် အရေပြား အလှအပပြုပြင်ခြင်းများကို နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိ အရေပြား နှင့် အလှအပ အထူးကုဆရာဝန်များကိုယ်တိုင် နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာဆွေးနွေးကုသပေးနေကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်ရှင်။
VICTORIOUS CLINIC မှ ဆရာဝန်များသည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ကမ္ဘာ့ အသိအမှတ်ပြုJuntendo University မှ အရေပြား ပါမောက္ခများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ ရှိ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုအစိုးရ အရေပြားဆေးရုံ (Institute of Dermatology )မှ အရေပြားနှင့် အလှအပ ပါမောက္ခများထံတွင် အရေပြားနှင့် အလှအပ ဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ ကို အချိန်ပြည့် စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ယူခဲ့ပြီးသူများနှင့် အရေပြားနယ်ပယ်တွင်လည်းအနည်းဆုံး ၇နှစ် နှင့် အထက် အတွေ့အကြုံရခဲ့ပြီးသူများလဲဖြစ်ပါသည်။
ထို့ ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ ရဲ့ အရေပြားနှင့် အလှအပဆိုင်ရာများကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာကုသချင်တဲ့အချိန်ရောက်ရင် VICTORIOUS CLINIC (Skin & Aesthetic ) ကို သတိရ လိုက်ပါနော်
“Ethical Care is the best service of our clinic”.
🌟သတင်းထူးလေးပေးချင်လို့ ပါ 🌟
အလှအပ အတွက် သိသိသာသာ ငွေကုန် မခံချင်တဲ့ ကိုကို မမ ဦးဦး တီတီ မောင် ညီမလေးများအတွက် Victorious Clinic မှာ
၆လ -၁၂ လ အရစ်ကျ သွင်း စနစ်နဲ့ ပြုပြင် ကုသလို့ ရပီနော်🔸🔸🔸
အလှတရားကို တခါထဲ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဖော်ထုတ်ပြသ နိုင် ဖို့ အတွက် CB bank Credit Card ရှိရုံနဲ့ Victorious Clinic ကို ကြွခဲ့ကြပါနော် 🔸🔸🔸
09 969121111 / 09 78440 7840 / 09 450301192 / 09 976184822
NO.32 Ground floor , Ma U Bin Street , Sanchaung Township.
Acne Treatment (၀က်ခြံအမျိုးမျိုးကုသခြင်း)
Acne Scar Treatment (၀က်ခြံ ချိုင့်ခွက်နှင့်အမာရွတ်ကုသခြင်း)
Melasma, Freckles & Sunspots Treatment (တင်းတိပ် ၊ မှဲ့ ချောက် ၊ အမဲစက်ကုသခြင်း)
IPL photo Facial Treatment (မျက်နှာဖြူဝင်းစေသော အလင်းပြလေစာ)
Meso Vitamin Treatment (မျက်နှာအသားအရေ ကြည်လင်စိုပြေစေသောကုထုံး)
Botox, Filler (အရေးအကြောင်းဖျောက်ခြင်း)
Thread Lifting Treatment (မျက်နှာတင်းရင်းအောင် ကြိုးထည့်ခြင်း)
Whitining Treatment (အသားဖြူကုထုံး)
RF Tightening (မျက်နှာတင်းရင်း၊ အဆီပျော်စေသော ကုသမှု)
Hair Removal Laser (လေဆာဖြင့်အမွှေးအမျှင်များ ဖယ်ရှားခြင်း)
Lipolysis Treatment (အဆီဖျော်ဆေးထိုးခြင်း)
Nose Thead Treatment (နှာခေါင်းကြိုးထည့်ခြင်း)
Anti – Fungal Treatment (အရေပြား မှိုစွဲခြင်းကုသမှု)
Noil Fungal Treatment (လက်သည်း၊ ခြေသည်း မှိုစွဲကုသမှု)
Vitiligo Treatment (ခရုသင်း ၊ သမင်ဖြူ ကုသခြင်း)
Anti – Dandruff Treatment ( ဦးရေပြားဘောက်ထခြင်း ကုသမှု)
Hair Growth Laser Treatment (ဆံပင်ပြန်ပေါက်အောင်လေဆာဖြင့် ကုသခြင်း)
Laser Tatoo Removal (လေဆာဖြင့် တက်တူးဖျက်ခြင်း)
Eczema Treatment (နှင်းခူကုသခြင်း)
ACD, ICD , Urticaria (အရေပြားဓာတ်မတည့်မှု ကုသခြင်း)
Mole Removal (မှဲ့ ဖျက်ခြင်း)
Psoriasis, Seborrheic Dermatitis (နာတာရှည် အရေပြားရောင်ရမ်းမှုကုသခြင်း)
Skin Biopsy (အရေပြား အသားစယူစစ်ဆေးခြင်း)